Mifindra amin'ny vanim-potoana R&D amin'ny fanabeazana asa | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYMifindra amin'ny vanim-potoana R&D amin'ny fanabeazana asa
Mifindra amin'ny vanim-potoana R&D amin'ny fanabeazana asa
21 / 05 / 2020 ANKAPOBENY, Headline, MISY FOTOTRA, TORKIA
R&D amin'ny fanabeazana matihanina
Mahmut Özer, lefitry ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, nilaza tamin'ny gazety iray momba ny drafi-piraisan'ny valan'aretina taorian'ny haino aman-jery an'ny R&D napetraka tao amin'ireo sekoly ambaratonga ambony. Hoy i ,zer, "hanana foibe 20 R&D eo ho eo izahay. Ny ivontoerana tsirairay dia hifantoka amin'ny faritra hafa. ”
Ny resadresaka nifanaovana tamin'ny lefitry ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Özer dia toy izao: "Mandeha amin'ny fotoanan'ny R&D isika amin'ny fampianarana", hoy ny lefitry ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Özer fa ity no iray amin'ny zava-bita lehibe indrindra amin'ny fivoahana covid-19 amin'ny fampianarana ara-bokatra. Hanampy vaovao izahay hihevitra ny fizarana. Hanana ivontoerana 20 R&D eo ho eo izahay. Ny ivontoerana tsirairay dia hifantoka amin'ny faritra hafa. Ohatra, ny afovoan-tanàna iray ihany no hiatrika rindrambaiko, fa ny iray kosa dia hifantoka amin'ny haitao teknolojia biomedical. Ny hifantohan'izy ireo dia ny fampandrosoana ny vokatra, ny patanty, ny maodely fampitaovana, ny famolavolana ary ny famokarana marika, ny fisoratana anarana ary ny varotra. Hampitombo ny fizaran'ny vokatra hatrany izahay. Izahay izao dia hitarika ny fampiofananay mpampianatra eny amin'ireto ivotoerana R&D isam-paritra ireto. ” Ny filazalazana fa havaozina haingana ny fandaharam-pianarana taranja arakaraka ny fizotran'ny asa ho an'ny automatique, rindrambaiko, haitao teknolojia voajanahary ary ny fahaiza-miaina nomerika, hoy i emphasizedzer nanamafy fa ny foiben'ny R&D dia handray anjara betsaka amin'ny fanavaozana.
Nisy ny fanafihana lehibe nataon'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena (MoNE) tamin'ny andro niadiana tamin'ny fipoahan'ny kovid-19. Vokatra marobe maro no novokarina avy amin'ireo fitaovana famonoana disinfection ilaina talohan'ny sekoly, avy amin'ny saron-tava, avy amin'ny vovoka miaro amin'ny tarehy sy ny akanjo famafazana. Amin'izany fomba izany, ny MEB dia nanao fandraisana anjara lehibe ho an'ny fisorohana ny valan'aretina amin'ny andro voalohany amin'ny tolona. Avy eo nanohy ny famokarana masinina masinina, fitaovana filtration rivotra, fitaovana laryngoscope horonantsary avy amin'ny respirator. Amin'ity dingana ity, izay mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana matanjaka dia ny fanazavan'ny lefitra lefitry ny MoNE Mahmut Özer hoe inona ny karazana fandaharam-pianarana ho an'ny asa aorian'ny fivoahan'ny kovid-19.
'Nisy fiantraikany ratsy
Nandritra ny andro niadiana Kovid-19, ny fiofanana arak'asa dia nanao fizahana nahomby. Inona no tadiavinao momba ny ho avin'ny fanabeazana matihanina, izay manana traikefa tena tsy ampoizina ihany koa?
Ny fanabeazana ara-bokatra dia nanao fandraisana anjara lehibe tamin'ny fanofanana ny loharanon'olombelona amin'ny fahaiza-manao matihanina takian'ny tsenan'ny asa an-taonany maro eto amin'ny firenentsika. Ny fanabeazana vokarety dia nanana fotoam-pahakiviana, indrindra aorian'ny fangatahana ny kaonferansa. Amin'ity vanim-potoana ity, ny fampianarana ho an'ny fampianarana dia mijanona ho safidin'ny mpianatra mahomby amin'ny akademia. Tao anatin'ireo taona nanaraka, nisy fahatafintohinana faharoa niaina tamin'ny fampiharana ny teboka napetraka ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ny zava-nitranga taorian'ny nanombohan'ny fangatahan'ny kaoperativa namerimberina, ny fanabeazana amin'ny fomba fiteny indray dia nanjary safidy takiana ho an'ny mpianatra tsy nahomby. Ireo fiasa ireo dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fitondran-tenan'ireo tompon'andraikitra sy mpampianatra anay ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Ny fanabeazana vokarasy dia nanjary niha olana noho ny tsy fahatongavan'ny mpianatra, ary ny fandikan-dalàna. Vokatr'izany, ny tsy fahaizan'ny diplaoma mahafeno ny antenaina amin'ny tsenan'ny asa dia nanamafy ny fomba fijery ratsy momba ny fanabeazana amin'ny asa. Noho izany, dia nisy ny fihoaram-po lehibe tamin'ny fahatokisana ny fanabeazana.
'Ny fahatokisan-tena azo'
Azo antoka ve ny fahatokisan-tena ao anatin'ity dingana ity?
Izay indrindra. Ny fandraisana anjara lehibe indrindra tamin'ity fomba ity dia ny famerenana indray ny fahatokisan-tena amin'ny andro fanta-daza amin'ny fampianarana. Nasehony izay azony atao rehefa voavaha ny olany, omena fotoana sy antony manentana. Amin'io fomba fiasa io dia tonga amin'ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny fahaiza-mamokatra sy famokarana famokarana izany, fa tsy amin'ny fanabeazana amin'ny lafiny fianarana. Raha nametraka fahombiazana bebe kokoa ny orinasam-baovao sy iraisam-pirenena dia nitombo ny fahatokisan-tena. Raha ny finoana ny zavatra azon'izy ireo atao, mamokatra ary izay vokariny dia sarobidy dia tonga ny fahombiazana.
'Ny ivontoerana tsirairay dia hifantoka amin'ny faritra iray'
Hijanona maharitra ve ny foiben'ny R&D ao anatin'ny andro taorian'ny fivoahan'ny Kovid-19?
Ao amin'ny fanabeazana amin'ny sehatra misy antsika, isika izao no mandalo ny fotoan'ny R&D. Ity dia iray amin'ireo fahombiazana lehibe indrindra amin'ny fihoaran'ny Kovid-19 ho an'ny fanabeazana amin'ny asa. Amin'ity dingana ity, hanampy vaovao isika amin'ireo foibe R&D izay napetrakay, amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fizarana faritra. Ireo fampianarana ireo dia efa ho vita. Hanana ivontoerana 20 R&D eo ho eo izahay. Ny ivontoerana tsirairay dia hifantoka amin'ny faritra hafa. Ohatra, ny afovoan-tanàna iray ihany no hiatrika rindrambaiko, fa ny iray kosa dia hifantoka amin'ny haitao teknolojia biomedical. Ny ivon-toerana dia hifampiresaka hatrany ary hifanohana. Ireo ivon-toerana ireo ihany koa dia ho ivon'ny fahombiazana. Ny hifantohan'izy ireo dia ny fampandrosoana ny vokatra, ny patanty, ny maodely fampitaovana, ny famolavolana ary ny famokarana marika, ny fisoratana anarana ary ny varotra. Hampitombo ny fizaran'ny vokatra hatrany izahay. Izahay izao dia hitarika ny fanofanana mpampianatra antsika amin'ireto toby R&D isam-paritra izao. Ireo ivon-toerana ireo koa dia handray anjara betsaka amin'ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana taranja asa.
Nitombo ny fahatokisan'izy ireo
Azontsika atao ve ny mamokatra fa ny fampiasam-bola novokarin'ny MEB tamin'ny fanabeazana asa nandritra ny roa taona lasa dia namokatra?
Yeah. Amin'ny maha-ministera anay, dia nifantoka tamin'ny fampianarana arak'asa izahay. Hitanay ny tetikasa tena lehibe. Ny zava-dehibe indrindra dia sambany nanatontosa fiaraha-miasa hentitra sy feno izahay ary solontena matanjaka amin'ny sehatry ny fanabeazana. Noho izany, nitombo tsikelikely ny fahatokisan'ny sehatry ny fampianarana amin'ny resaka vokar. Ireo dingana rehetra ireo dia nahafahana namaly haingana haingana, miombona ary mavitrika amin'ny fizotrana amin'ity dingana ity.
Ahoana no hataonao ankehitriny?
Hanohy ny fanamafisana ny tsingerin'ny fanabeazana-famokarana-asa ho an'ny fanabeazana. Havaozinay hatrany ny fiofanana amin'ny fiaraha-miasa mafy kokoa amin'ny tsenan'ny asa. Ho ataonay amin'ireo foiben'ny famokarana ny sekoly ambaratonga ambony. Hanohy hatrany ny fahaizan'ny famokarana vokatra sy serivisy, indrindra ao anatin'ny faritry ny vola mihodina. Ohatra, tamin'ny taona 2019, dia nampitombo ny vola azontsika amin'ny famokarana amin'ity sehatra ity isika 40 isan-jato ka hatramin'ny 400 tapitrisa TL. Tamin'ny taona 2021, ny famokarana TL miliara 1 tapitrisa izahay. Ny olana lehibe indrindra dia ny fanatsarana ny fahafaha-miasa sy ny fepetra momba ny mpiasa any amin'ny tsenan'ny asa. Ny fiaraha-miasa napetrakay tamin'ny sehatra misy ny laharam-pahamehana ho an'ny asa no dingana voalohany nanatontosana azy. Ireo dingana ireo dia mbola hitombo hatrany.
'Ny vokatra rehetra nifantohanay dia novokarina'
Nametraka ivontoerana R&D any amin'ny lise enseignement vocal ianao. Inona ny antony?
Ny fandraisana anjara tamin'ny fampiofanana arak'asa tamin'ny andro niadiana tamin'ny Kovid-19 dia indroa heny. Ny dingana voalohany dia nahitana famokarana faobe sy fanaterana saron-tava ilaina, mpamono otrikaretina, trinketra miaro ny tarehy, apro ary overalls. Nahomby tokoa ity sehatra ity ary mbola nitohy ny vokatra vokatr'izany. Ny dingana faharoa dia nifantoka tamin'ny famolavolana sy ny fanamboarana fitaovana toa ny respirator sy milina saron-tava ilaina hiadiana amin'ny kovid-19. Mba hahombiazana amin'ny dingana faharoa, dia nametraka ivontoerana R&D izahay ao anatin'ny sekoly ambony sy teknika teknolojia Anatolianina ao amin'ny faritaninay misy fotodrafitrasa matanjaka. Nohamafisinay ny fanamboarana ny ivon-toerana R&D amin'ny famolavolana sy ny famokarana ireo vokatra ireo. Ny fandalinana fatratra tokoa dia natao tamina ivon-toerana natsanganay tao amin'ireo tanànantsika toa an'i Istanbul, Bursa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Muğla ary Hatay. Tao amin'ireto ivontoerana ireto dia afaka namokatra ny vokatra rehetra izay nifantohany izahay. Amin'izany toe-javatra izany, maro ny vokatra novolavolaina sy novokarina toy ny mason-jaza fandidiana, respirator, milina fenitra fenitra N95, fitaovana laryngoscope lahatsary, fandriana fikarakarana ara-pahasalamana, fitaovana filtration rivotra, unit santionany.
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny ITU-ASELSAN
Raha jerena ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana, hanao fanavaozana vaovao ve ianao, hihevitra fa hiseho ny tsenan'ny asa taorian'ny fipoahan'ny Kovid-19?
Mazava ho azy. Aorian'ity dingana ity dia hisy fanavaozana haingana fandaharam-pianarana ho an'ny fahaizana nomerika. Tsy raisinay fa andrim-pampianarana arak'asa sy ara-teknika toy ny andrimpanjakana izay ny fahaiza-manao ihany no omena. Tianay ho azon'ny mpianatra rehetra ny fahaiza-manao lehibe mba hahafahan'izy ireo mampifanaraka ny fanovana ny toe-javatra ara-teknolojia sy ara-tsosialy. Te-hampihena ny fahasamihafana eo amin'ny fampianarana sy ny fampianarana amin'ny ankapobeny isika. Noho izany, miara-miasa amin'ny fikambanana matanjaka ara-teknika sy matihanina isika toy ny ITU sy ASELSAN. Ny fahaiza-manao ilaina arakaraka ny haavon'ny teknolojia eo amin'ny tsenan'ny asa dia hampiana amin'ny fandaharam-pianarana isaky ny matihanina izay ampianarintsika. Na izany aza, tsy ho afa-po amin'izany isika fa hiezaka hanamafy ny fahaiza-manaon'ny besinimaro izahay.
Ny fitaterana an-dalamby dia manomboka any Kocaeli
Mahmutbey rafitra maimaim-poana
Ny Fikambanan'ny TCDD dia mivory amin'ny fampianarana
Protocole momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny fianarana eo amin'ny TCDD sy Ankara University
Akçaray miala sasatra amin'ny fahavaratra
Ny fitateram-bahoaka ao Sakarya dia mandalo ny vanim-potoan'ny validora
Fisorohana hanoherana ny Coronavirus ..! Nanomboka tany BursaRay ny vanim-potoan'ny dia tsy nifandray
Famokarana maodelin'ny karazana entana vaovao
Misy lalàna vaovao momba ny fifamoivoizana ao Halkapınar
Dingana farany no mandalo ao Konak Tram
120 Olona an'arivony nafoy niaraka tamin'ny alina fitetezana tany Antalya ... 9 nanomboka ny planeta ririnina tamin'ny Septambra
TÜVASAŞ General Manager İbrahim Ertiryaki dia hametraka fifanarahana ara-barotra amin'ny firenena manodidina.
Nanomboka ny fanadihadian'ny Sehatry ny Fitateram-bahoaka i Sakarya Metropolitan
MOTAŞ dia vonona amin'ny fanabeazana vaovao
FIVORIANA FANAOVANA EO AMIN'NY MASOIVOHON'NY TANY
haitao fitaovana teknolojia
Fitaovana filtration rivotra
Sekoly ambaratonga ambony
Ny foiben'ny R&D any amin'ny lisea arak'asa
Masinina milina N95
fitaovana laryngoscope lahatsary
teknolojia haino aman-jery
TİGEM Ceylanpınar Irrigation Project dia mandeha any amin'ny fiainana rahampitso
Satso Professional Promotion sy Days Career
Atatürk ny Sekoly ambony momba ny fianarana ambony sy teknikam-pianarana Anatôliana dia mitsidika ny TÜDEMSAŞ